स्वास्थ्यशैली Archives - Page 55 of 55 - Recent Nepal News
काठमाडौं - यौन मानिसको एउटा अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई पूरा गर्दा वा यसलाई व्यवस्थापन गर्दा हामीले निकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो सावधानी अपनाउँदा ठूलो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । सामान्य लाग्ने लापरवाहीले पनि हाम्रो शरीरमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्दछ । त्यसकारण यौन सम्पर्क गर्नुपूर्व यी काम भुलेर पनि गर्नुहुँदैन : १.पिसाव गर्नुहुँदैन मुत्रनलीमा हुने संक्रमण वा घाउक...
ल्वाङको प्रयोग मसला र औषधिका रूपमा पहिलादेखि हुँदै आएको छ । ल्वाङमा धेरै औषधीय गुण छन् । जसले तपाईंका सानातिना स्वास्थ्य समस्यामा लाभ पु¥याउँछ । एक लिटर पानीमा ८–१० गोटा ल्वाङका राखेर पानी उमाल्ने । पानी मनतातो भइसकेपछि पिउने । रुघा र ज्वरो आएको मानिसलाई यस पानीले फाइदा पु¥याउँछ । पेटमा जुका परेको छ भने ३–४ गोटा ल्वाङ पिसेर एक चम्चा महमा मिसाउने र खाने । केही दिनसम्म यसो गरेमा समस्याबाट राहत...
गर्भधारणका लागि कुन महिना उपयुक्त ?
एजेन्सी– यो संसारका धेरै प्राणीको बच्चा जन्माउने प्राकृतिक समय छ । प्रकृतिले नै उनीहरुको सहवास र सन्तान उत्पादन प्रक्रिया नियन्त्रण गरिरहेको छ । तर, मानवले हरेक प्राकृतिक कुरा उलंघन गर्दै आइरहेको छ । वर्तमान युगमा पुगेपछि फेरि बहश आरम्भ भएको छ, मान्छेले चाहिँ कहिले सन्तान जन्माउँदा उपयुक्त ? यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेका छन् । आफूले जन्म दिने सन्तान स्वस्थ होस् भन्ने हरेकको चाहना हुन्छ । ९ महिनासम्...